प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नबाट प्रतिपक्षलाई वञ्चित गर्दा चुकेकै हुन् त सभामुख महरा ?
काठमाडौं –कुनैबेला कृष्णबहादुर महराका प्रेस सल्लाहकार रहेका नरेन्द्रजंग पिटरले ट्विटरमा लेखे– ‘संसदीय राजनीतिक अभ्यास नग्न पूँजीवादी लोकप्रिय आवरण हो । तर यसका आफ्नै आदर्श – सरकार बहुमतको, सदन प्रतिपक्षभन्दा दमननाथ ढुंगाना कांग्रेसले दुत्कार्‍यो । दायित्व निर्बाह गर्दा भाकपाले सोमनाथ चटर्जीलाई कारवाही गरेको नजिर छ । सभामुख केबी महराले रेशम चौधरी र आज प्रतिपक्षलाई बहसमा भाग लिन नदिने विषयमा चुके ।’
संसदिय राजनीतिकअभ्यास नंग्नपुजिवादी लोकपृयअावरण हो तर,यसका अाफ्नै अादर्श- सरकार बहुमतको,सदन प्रतिपक्षभन्दा दमननाथ ढुगाना काग्रेसले दुत्कार्यो।दायित्व निर्वाहागर्दा भाकपाले सोमनाथचटर्जीलाइ कारवाही नजिरछ।सभामुख केबी महराले रेशम चाैधरी र अाजप्रतिपक्षलाइ बहसमाभाग लिननदिने विषयमाचुके। pic.twitter.com/ombr5JhEWe
— NarendraJung Peter (@narendrapeter) January 6, 2019
वामपन्थी विश्लेषक पिटर हालका सभामुख कृष्णबहादुर महरा सञ्चार मन्त्री रहेको समयमा प्रेस सल्लाहकार थिए ।
पछिल्ला केही घटनामा महराले पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो व्यवहार देखाएको कांग्रेसको आरोप छ । परन्तु, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट चुनाव जितेर सभामुख भएका महराले सभामुख निर्वाचित भएपछि पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिएको बताएका थिए ।
आइतवार भएको के थियो ?
प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरे । पुस २२ गतेको संसदको कार्यसूचीमा ‘प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिने’ उल्लेख थियो ।
पुस १२ गते शुरू प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक सम्बोधन गरेका थिए, आइतवार । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सम्बोधनका कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नका लागि समय माग्यो । तर महराले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन ‘संसद् नियमावलीको परिच्छेद ८ को दफा ४० देखि ५५ सम्म र परिच्छेद ९ को दफा ५६ देखि ६० सम्म अनुसार’ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नभएको प्रष्टीकरण दिए । उनले संसद नियमावली अनुसार हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा समय दिने भन्दै कांग्रेस सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले गलत तथ्याङ्क पेश गरेकोले सोही दिन प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको दलिल रह्यो ।
कांग्रेस सांसदहरूले ‘सभाको मर्यादाको लागि’ भन्दै प्रश्न गर्न माग गरेपछि सभामुख महराले सिमित सदस्यलाई बोल्नको लागि समय दिने भन्दै कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजाललाई समय दिए । तर ‘सीमित’लाई होइन चाहने जतिलाई बोल्न दिनुपर्ने भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले विरोध कायमै राखे ।
कांग्रेस सांसदहरूले विरोध कायम राखेपछि सभामुख महराले दिएको समय पनि नदिने घोषणा गरे । त्यसपछि संसदमा हंगामा भयो । विपक्षीले होहल्ला गरेपछि सभामुखले संसदको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने विषयलाई प्रतिष्ठा बनाएको कांग्रेसका कारण आइतवार बैठक बस्न सकेन । १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँसेर पुस २५ गते सम्मका लागि स्थगित भयो । बैठक स्थगितपछि कांग्रेस नेता गगन थापाले सभामुख महराले राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनेर हुकुमी शैलीमा संसद् चलाउन लागेको आरोप लगाए ।
कहाँनेर चुके त महरा ?
२०५१ र ०५६ सालको प्रतिनिधि सभाबाहेक २०४८ पछि गठन भएका पाँचवटा संसदमा महरा सांसद थिए । संसदीय मूल्य मान्यता र परम्पराप्रति जानकार मानिन्छन् । शान्ति प्रक्रियामा खेलेको भूमिकाका कारण उनलाई शालीन र अरुलाई मिलाउने नेताको रूपमा चिनिँदै आएको छ । सभामुख निर्वाचित भएपछि पनि महराले प्रतिपक्षलाई सहमतिमै लिएर सदन सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।
महरा यस्तो समयमा सभामुख छन्, जुनबेला प्रतिपक्ष नाम मात्रको छ । सत्तासँग दुईतिहाइको भारी बहुमत रहेको समयमा प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेससँग एक चौथाइ पनि सदस्य छैनन् । तर संसदीय राजनीतिमा अंकगणितको मात्र हिसाब हुँदैन । ‘संसदलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने थलो मात्र बनाइयो भने संसदको औचित्य के रहन्छ ? बाहिरबाटै निर्वाचित गरेपनि हुन्थ्यो नि ! संसदमा बहुमत र अल्पमतको मात्र हिसाब हुँदैन यो । लोकतन्त्रको आधारभूत संस्था हो,’ कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले केही दिन पहिले संसदीय समितिमा भनेका थिए ।
आइतवार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने मामिलामा सभामुख चुकेको स्वयं नेकपाका नेता, सांसद र केही पूर्व सभामुखहरूको ठम्याइ छ । ‘सभामुख महरा चुक्नुभएको छ,’ गणतन्त्र स्थापनापछिका एक सभामुखको प्रतिक्रिया छ ।
संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार पहिला सीमित सदस्यलाई बोल्न दिने र एकैपछिमा फेरि बोल्न दिन्नँ भनेर महरा चुकेको बताउँछन् । ‘सभाको सञ्चालनमा सभामुखको विशेषाधिकार हुन्छ, तर समितिलाई बोल्न दिने र धेरैलाई बोल्न नदिने भन्ने नियमावलीमा लेखिएको छैन, र संसदीय परम्परा पनि होइन,’ एक सांसद भन्छन् ।
सभामुख महराका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्ल महराको विगतदेखिको राजनीतिक पृष्ठभूमि नै समन्वय गरी मिलाएर लैजाने खालको भएकाले अहिले सरकारलाई समर्थन गर्ने या प्रतिपक्षलाई चिड्याउने मनसाय नभएको बताउँछन् । ‘अस्तिको बैठकमा पनि सभामुखज्यूले प्रतिपक्षले समय माग गरेपछि मीनेन्द्र रिजाललाई समय दिनुभएको थियो । तीनपटक नाम उच्चारण गर्दापनि उहाँहरू नबोल्नुभएको हो,’ मल्लले लोकान्तरसँग भने, ‘सभामुखको निष्पक्षताका बारेमा प्रश्न उठाउन जरुरी छैन । आगामी भूमिकाले पनि देखिन्छ ।’
सभामुखले प्रश्न सोध्न रोक्न मिल्दैन : पूर्वसभामुख रानाभाट
प्रतिनिधि सभा भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न शक्तिका स्रोत जनताका प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरू रहने थलो हो । त्यहाँ जतिपनि दलहरू उपस्थित रहन्छन् र जुन प्रक्रियाले सभामुख निर्वाचन हुन्छ, त्यहाँ निर्वाचित भएपछि सभामुख कुनै दल विशेषको सदस्य रहँदैन । त्यो पद साझा पद हुन्छ । त्यो गाइडेड हुन्छ, संविधानले, संसदको नियमावलीले र संसदीय अभ्यासका मूल्य मान्यता र परम्पराले । त्यतिमात्र होइन उसको विवेक पनि गाइडेड हुने र दलीय राजनीति भन्दा माथि निष्पक्ष हुने भएको हुनाले त्यसलाई नियम अनुसार सुसंस्कृत ढंगले जनभावना प्रतिबिम्वित हुने र त्यहाँका सूचना जनतासम्म पुग्ने प्रबन्धका लागि सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले कुन कार्यक्रममा बोल्नुभयो, त्यसको अर्थ जनताको सर्वोच्च निकायमार्फत् जनतालाई सुसुचित गरेको हो नि ! जनताका चिन्ता र आवश्यकता र सोचहरूलाई उहाँले आफूले गरेको र गर्न खोजिएको सम्पन्न भएको या सम्पन्न हुने क्रममा रहेको, उपलब्धि भएको या उपलब्धि लिन सकिने देशको शान्ति सुरक्षा यावत कुराको बारेमा सूचना दिन प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा संसदको नियमावलीले पनि, परम्पराले पनि स्पष्ट नभएको अवस्थामा स्पष्ट हुने चाहना संसद् सदस्यको रहन्छ । वा कुन ैकुरा प्रधानमन्त्रीले जानीजानी या काम विशेषले जवाफ दिनुपर्ने विषय छुटेका रहेछन् भने किन छुट्यो भनेर प्रश्न गर्न पनि पाइन्छ । त्यसमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुवैले अवसर पाउँछन् । खाली त्यसमा सभामुखको अनुमति लिएर प्रश्न गर्ने प्रचलन मात्र हो । अनुमति लिएर सोध्ने भनेको सदस्य विशेषले सोध्दा पनि जनताको चाहना प्रतिबिम्वत होस् भन्ने कुरामा सभामुख सचेत रहनुपर्छ । त्यसैले यो पार्टी या त्यो पार्टी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेर या विपक्षमा रहेर अथवा कुनै घटना विशेषमा आग्रह पूर्वाग्रह राखेर यदि त्यो गरिएको हो भने सभामुखको गरिमा र मर्यादा भन्दा पृथक विषय भयो । अलिकति अमिल्दो विषय हो ।
जनकारी लिन पाउने र सदस्यको अधिकार भनेको जनतालाई सूसुचित गर्ने प्रबन्ध हो । त्यसलाई सभामुखले किन रोक लगाउन खोज्नुभयो, कारण के थियो ? यदि म प्रधानमन्त्रीको पार्टी र मेरो पार्टीको प्रधानमन्त्री भनियो भने त त्यो ज्यादै असंगत कुरा रह्यो । लामो या छोटो कति समय सकिन्थ्यो प्रश्नोत्तरलाई बन्द गर्न उचित थिएन । प्रतिपक्ष मात्र होइन, प्रधानमन्त्री मन्त्रीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दा पूर्ण नभए पूर्णताका लागि र भ्रमपूर्ण भए भ्रम चिर्नका लागि जिज्ञासा राख्ने या जनताको सरोकार रहेका विषयहरूलाई जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले प्रश्न सोधेर स्पष्टीकरण लिने त जनताका प्रतिनिधिको कर्तव्यभित्र पर्ने कुरा हो । जनप्रतिनिधिको त्यो अधिकारलाई सभामुखले दल विशेषसँगको सम्बन्धका कारणले रोक्नु या प्रतिबन्द लगाउनु हुँदैन ।
पढ्नोहोस यो पनि :
महराको अग्निपरीक्षा: सदन सत्ता कि प्रतिपक्षको ?
अयोध्या विवादकै झल्को दिने 'हाया सोफिया' : चर्च, म...
चीनबाट हुनसक्ने सम्भावित आक्रमण रोक्न ताइवानले गर्‍यो युद्धाभ्यास
कारकेडका लागि मोटरसाइकल खरिद गर्दा 'अनियमितता', मापदण्डविपरीतको साधन किन्न बोलपत्र नै संशोधन
राखेपको सदस्य सचिवमा अच्युतम लामिछानेको उम्मेदवारी, को हुन् उनी ?
थप १६७ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको कुल संख्या १७ हजार ३४४ पुग्यो
'चौतारीको बर' पछि बिक्रमले ल्याए 'आधा माया' [भिडियोसहित]
नेपालमै पहिलो पटक एचबीओका च्यानलहरू मोबाइल एपमा, डिशहोमका प्रयोगकर्ताले निःशूल्क हेर्न पाउने